China HDI PCB, HDI PCB manokana, PCI Prototype HDI, Mpanamboatra PCB Board HDI
Description:HDI PCB,HDI PCB manokana,HDI Prototype PCB,HDI Board PCB,,
Ny vokatra avy amin'ny HDI PCB , mpanofana manokana avy any Shina, HDI PCB , HDI PCB manokana mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny HDI Prototype PCB R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
4 layer HDI miaraka amin'ny Muti-design PCB  Contact Now
Tabilao HDI PCI 10 layer  Contact Now
jamba ary nalevina tamin'ny alàlan'ny teknolojia  Contact Now
vidin'ny jamba sy ny fandevenana vias  Contact Now
HDI pcb amin'ny famolavolana endrika  Contact Now
inona no jamba sy nalevina vias  Contact Now
10Ny fanodinana HDb pcI layer  Contact Now
jamba sy nalevina pcb pcb  Contact Now
jamba sy nalevina vita amin'ny vias  Contact Now
Birao HDI PCB avo lenta  Contact Now
jamba sy nandevina viétra endrika  Contact Now
6 apetaho sosona HDI PC misy sosona rehetra  Contact Now
8 sosona TG170 1.6mm manga birao HDI mivarotra  Contact Now
Muti-design 4 layer Buried & Blind Via PCB  Contact Now
8metimetim-paritra 2.5mil sy habaka HDI PCB  Contact Now
4 layer 1,6mm 2OZ HDI PCB  Contact Now
4 layer FR4 1.6mm HDI ENIG PCB  Contact Now
Ny fanaraha-maso ny tsimokaretina HDI 3 layer dia PCB  Contact Now
HDI PCB dia mampiasa fitaovana laminate mandroso izay manjavozavo noho ireo ampiasaina amin'ny takelaka circuit vita pirinty. Koa satria ny HDI PCB dia mitaky ny mahitsy kokoa sy ny famokarana marina ary ny fampisehoana amin'ny ankapobeny,...
4 layer HDI miaraka amin'ny Muti-design PCB
Tsy sahala amin'ireo mpamatsy PCB hafa no ekenay ny baikonao PCB miaraka amina drafitra marobe ao anaty panel iray.Misy mpanjifa maro no nilaza taminay fa te-hanapaka ny vidiny izy ireo rehefa manao asa famolavolana izy ireo satria mety hiova ny...
Tabilao HDI PCI 10 layer
HDI PCBs dia mampiasa fitaovana manjelanjelatra avo lenta, ary manana tsipika varahina tsara sy mikrôkiazy. Na dia misy aza ny fomba samihafa, misy ny voaroy, ny sasany tsy mampiasa, na inona na inona teknolojia antsoina hoe Every Layer Interconnect...
HDI PCB dia mety mampihena ny vidin'ny PCB: Rehefa mitombo ny haben'ny PCB mihoatra ny 8 layer, dia novokarin'ny HDI, ary hihena ny vidiny raha oharina amin'ny dingan'ny lamination sarotra nentim-paharazana. Mampitombo ny...
vidin'ny jamba sy ny fandevenana vias
Ny sakamalaho misy sakana latsaky ny 150um dia antsoina hoe microvias ao amin'ny orinasa. Ny PCB vita amin'ny fampiasana ity teknolojia géomôlôma mikrôlôma ity dia afaka manatsara ny tombotsoan'ny fivorian'ny PCB, ny fampiasana ny...
HDI pcb amin'ny famolavolana endrika
Ny birao HDI PCB dia vokarina amin'ny alàlan'ny fampiasana teknolojia lavaka mikitroka. Ny mampiavaka azy dia ny haavon'ny siramamy elektronika amin'ireo takelaka fizahana vita pirinty dia mety ho avo kokoa, ary ny fitomboan'ny...
inona no jamba sy nalevina vias
Ny zana-tsipika HDI PCB dia zana-pirindran'ny PCB haingam-pandeha avo lenta. Ny zana-baravarankely misy fantsom-baravarana jamba ary lamination sekta dia zana-bokatra HDI daholo. Izy ireo dia mizara ho voalohany-, faharoa-, fahatelo-, fa-, ary...
10Ny fanodinana HDb pcI layer
Raha ny marina, tsy misy famaritana mazava ny fomba famokarana avo lenta HDI PCB, fa amin'ny ankapobeny ny fahasamihafana misy eo amin'ny HDI sy ny tsy HDI. Voalohany, ny aperture ao amin'ny board circuit izay vita amin'ny HDI dia...
jamba sy nalevina pcb pcb
Amin'izao fotoana izao, ny vokatra elektronika malaza be dia be, toy ny finday, fakan-tsary dizitaly, solosaina finday, elektronika automatique sns ..., dia mampiasa tabla HDI PCB. Miaraka amin'ny fanoloana ny vokatra elektronika sy ny...
jamba sy nalevina vita amin'ny vias
Ny vokatra elektronika dia tsy mitsaha-mitombo mankany amin'ny habeny avo lenta ary mazava tsara. Ilay antsoina hoe "avo", ho fanatsarana ny fampandehanana ny masinina dia tsy maintsy mampihena ny haben'ny masinina ihany koa. Ny...
Birao HDI PCB avo lenta
Rehefa mitombo mihoatra ny 8 takelaka ny halalin'ny PCB, dia mihena ny vidiny noho ny fomba fanalam-barotra nentim-paharazana. Ny birao HDI PCB dia mifanaraka amin'ny fampiasana teknolojia vita amin'ny fonosana mandroso, fampiasa...
jamba sy nandevina viétra endrika
Ny birao HDI PCB amin'ny ankapobeny dia amboarin'ny fomba lamination. Arakaraka ny fotoana fanandramana, ny avo kokoa ny lenta teknikan'ny birao. Ny zana-bokatra HDI PCB mahazatra dia manamboatra livatra indray mandeha. HDI avo lenta dia...
Biraon'ny HDI PCB (High Density Interconnector), izay conputur conputility avo dia avo, dia board circuit PCB izay manana fanapariahana avo lenta amin'ny alàlan'ny teknolojia bitika-joro-fandevenana. Ny birao HDI PCI dia misy ny faritra...
Storm Circuit dia mpanamboatra PCB matihanina sy PCBA any Chine, mifantoka amin'ny fifangaroana avo, ambany be amin'ny haino aman-jery PCB antitra ary serivisy fivorian'ny PCB mandritra ny taona maro . Azontsika atao ny manolotra jamba 8...
Muti-design 4 layer Buried & Blind Via PCB
Storm Circuit dia mpanamboatra PCB matihanina sy PCBA any Chine, mifantoka amin'ny fifangaroana avo, ambany be amin'ny haino aman-jery PCB antitra ary serivisy fivorian'ny PCB mandritra ny taona maro . Azontsika atolotra ny PCB Buried...
8metimetim-paritra 2.5mil sy habaka HDI PCB
Storm Circuit dia mpanamboatra PCB matihanina sy PCBA any Chine, mifantoka amin'ny fifangaroana avo, ambany be amin'ny haino aman-jery PCB antitra ary serivisy fivorian'ny PCB mandritra ny taona maro . Azontsika atao ny manolotra HD...
4 layer 1,6mm 2OZ HDI PCB
PCB manasongadina: 1.Layer: 2 2.Material: FR4 3.Thickness: 1.6mm 4.Copper: 1OZ 5. lavaka mitoto: 0.25mm 7.Mini sakany / habaka: 0.15mm / 0.15mm 8.Finosena: Volon'ny fametahana 9.HDI: L1-L2 L3-L4 Ny fahaizanay manamboatra: Fametahana...
PCB manasongadina: 1.Layer: 4 2.Material: FR4 3.Thickness: 1.6mm 4.Copper: 2OZ 5. lavaka mitoto: 0.3mm 7.Mini sakany / habaka: 0.2mm / 0.2mm 8.Finosena: Volon'ny fametahana 9.Ny lavaka: L1-L2, L3-L4. Ny fahaizanay manamboatra: Fametahana...
Ny High Density Interconnect (HDI) dia ampiasaina hamenoana ny fangatahana tsena amin'ny famolavolana mason-tsivana amin'ny endrika kely kokoa amin'ny ampahany amin'ny ampahany amin'ny ampahany amin'ny tsena, (Wireless,...
HDI PCBs aseho amin'ny toetra mirazotra avo be ao anatin'izany ny laser microvias, tsipika tsara ary fitaovana manify avo be. Ity fitomboan'ny fitomboana ity dia ahafahana miasa bebe kokoa isaky ny faritra. Ny teknolojia HDI avo lenta...
Ho an'ny fanaraha-maso ny sakana PCB, Azontsika atao ny manova ny sakan'ny trace / habaka na ny fanenanana, fa aza miahiahy, raha misy fanovana dia halefanay aminao ianao hanaiky alohan'ny hanohizana. Amin'ny ankapobeny, ny...
Shina HDI PCB mpamatsy
Ny PCB serasera avo lenta (HDI) dia maneho ny iray amin'ireo fizarana haingana indrindra amin'ny tsena board circuit vita pirinty. Noho ny haben'ny circuitry avo dia avo, ny famolavolana HDI PCB dia afaka mampiditra amboara sy habaka tsara kokoa, vià kely kokoa ary maka paroasy ary avoaka kokoa ny fifandraisana pad. Ny PCB misy haingam-pandeha avo dia ahitana ny jamba sy ny fandevenana avia ary matetika misy mikrôka izay .006 ny savaivony na kely kokoa aza.
HDI PCBs aseho amin'ny toetra mirazotra avo be ao anatin'izany ny laser microvias, tsipika tsara ary fitaovana manify avo be. Ity fitomboan'ny fitomboana ity dia ahafahana miasa bebe kokoa isaky ny faritra. Ny teknolojia HDI avo lenta dia manana takelaka maro vita amin'ny varahina mameno microvias mitahiry (Advanced HDI PCBs) izay mamorona rafitra iray izay ahafahana mifanerasera be pitsiny kokoa. Ireo rafi-dàlana tena saro-takarina ity dia manome vahaolana ilaina amin'ny lozisialy pin-count ankehitriny izay ampiasaina amin'ny fitaovana finday sy vokatra avo lenta amin'ny haitao avo lenta.
Ny HDI PCB izay atolotray dia misy ireto manaraka ireto:
Jamba sy / na fandevenana avia
Amin'ny alàlan'ny vias avy any ambony ka hatrany ambonin'ny
20 µm géometria circuit
30 µm sosona dielectric
50 laserm laser vias
125 µm fanamboarana vatomamy
HDI PCB dia ampiasaina hampihenana ny habeny sy ny lanjany, ary koa ny hanamafisana ny fampandehanana herinaratra amin'ny fitaovana. HDI PCB no safidy tsara indrindra amin'ireo takelaka avo lenta sy tabilao manara-penitra manara-penitra na tabilao milahatra notandremana. HDI dia mampiditra an-jamba sy boribory izay manampy amin'ny famonjena ny trano PCB amin'ny alàlan'ny mamela ny endri-javatra sy tsipika noforonina etsy ambony na ambanin'izy ireo raha tsy misy fifandraisana. Ny ankamaroan'ny androany misy ny BGA tsara sy ny flip-chip chip tapakila tsy avelan'ny mihazakazaka eo anelanelan'ny pad BGA. Ny jamba sy ny fandevenana avia dia mampifandray ireo takelaka mitaky fifandraisana eo amin'io faritra io.
HDI PCB HDI PCB manokana HDI Prototype PCB HDI Board PCB HDI PCB Cost